Ans. Dedicated Network Technology အရ သီးခြား Fiber Cable Line တွင် အခြားမည်သည့် Sharing Line များ အသုံးပြုထားခြင်း မရှိသောကြောင့် Dedicated Fully Bandwidth ကိုရရှိစေနိုင်သော Network System များ ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ GlobalNet DIA သည် လူကြီးမင်း၏ ရုံးခန်းအတွင်းသို့အရောက် သီးသန့်ဖိုင်ဘာကြိုးဖြင့် သွယ်တန်းပေးသောကြောင့် အခြားသူများနှင့် sharing မလုပ်ရပါ။ (no wireless, no microwave, 100% fiber cable)
Q3. GlobalNet DIA Service သည် မည်သည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ အတွက်ပိုမိုသင့်လျှော်ပါသလဲ၊ မည်သည့် အားသာချက်များ ရှိပါသလဲ။
Ans. Network ပြတ်တောက်မှု မရှိစေရေးအတွက် အမြင့်ဆုံးအာမခံချက် (SLA) များပါရှိပါသည်။ Availability 99.99% အသုံးပြုနိုင်စေရပါမည်။ ပြတ်တောက်မှုရှိပါက ၄ နာရီအတွင်း(Mean time to Restore) ပြန်ကောင်းရန် အာမခံပါသည်။ ၄ နာရီထက်ပိုမိုပြတ်တောက်ပါက လစဉ်ကြေးမှရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ပြန်လည်ပေးလျော် သောအထူးအာမခံချက်များပါရှိသည့် အထူးဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ပါသည်။
Ans. GloalNet Technology Company ၏ Enterprise Sales Team နှင့် GlobalNet Sales Team များသို့ ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပြီး Sales Teams များမှ လူကြီးများထံသို့ လာရောက်ဆွေးနွေး‌‌ အကြံပြုပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Ans. GlobalNet DIA Service ကို အသုံးပြုသော Customer များအတွက် အခြားသူများထက်ပိုမို သာလွန်၍ မြန်ဆန်တည်ငြိမ်သော အင်တာနက်အရည်အသွေး၊ သေသပ်တိကျသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု နှင့် တပ်ဆင်မှု၊ အာမခံပေးထားသော SLA Level များအတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝရရှိခြင်း၊ လိုအပ်သည့် ထောက်ပံ့မှုများအတွက် အလွယ်တကူ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားနိုင်ခြင်း အစရှိသည့် များစွာသော Customer Service Quality အပြည့်အဝဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရရှိခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Q9. Global Net DIA Service က Customer Service အတွက် အချိန်ပြည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသလား။
Q10. Business လုပ်ငန်းများအတွက် လိုင်းပြတ်တောက်မှု မရှိစေရန် ဘာကြောင့် အာမခံ ပေးနိုင်ရပါသလဲ။